मुक्तिनाथको आशिर्वादले आज सनिश्चवार यी राशिको भाग्य मालामाल – तपाईको दिन शुभ रहोस् - Deshko News Deshko News मुक्तिनाथको आशिर्वादले आज सनिश्चवार यी राशिको भाग्य मालामाल – तपाईको दिन शुभ रहोस् - Deshko News
मुक्तिनाथको आशिर्वादले आज सनिश्चवार यी राशिको भाग्य मालामाल – तपाईको दिन शुभ रहोस्
आज श्री शाके १९४० बि.स. २०७५ साल पौष २१ गते शनिबार इश्वी सन् २०१९ जनवरी ५तारीख पौष कृष्णपक्ष औंसी तिथी मूल नक्षत्र १५ः२१ बजे सम्म उप्रान्त पूर्वाषाढा नक्षत्र ध्रुव योग चतुष्पद करण १७ः३० बजे सम्म उप्रान्त नाग करण चन्द्रमा धनु राशिमा आनन्दादियोगमा गद योग सुर्य दक्षिणायन हेमन्त ऋतु स्नान–दान गर्ने, हलो बार्ने औंसी, विष्णुपादुका, वराहक्षेत्र, गोकर्ण, वेत्रावती आदि तीर्थक्षेत्रमा स्नान दान तथा श्राद्ध, गया मौनी तथा पौषी औंसी – ज्यो.पं. सरोज घिमिरे
धार्मिक क्षेत्रको यात्राको सम्भावना रहेकोछ । मित्रजन सगँको साथ सम्बन्धमा साधारण तिक्तता देखा पर्न सक्नेछ । पारीवारिक मनोरञ्जनका क्षेत्रमा सामान्य खर्च हुन सक्नेछ । मान्यजनको साथसहयोगमा गरीएका कार्यहरु र्दीघकालिन साबित हुनेछन् ।
अनावश्यक बादबिवादको चपेटामा फस्ने सम्भावना रहेको छ । भोजभतेर जन्य कार्यमा सहभागिता जनाउने अवसर प्राप्त हुनेछ । दाजुभाई तथा मित्रजनको मार्गदर्शनमा आर्थिक क्षेत्र सुदृण बनाउने मार्ग फेला पर्नेछ ।
जीबन साथिको साथ सहयोगमा ब्यापार ब्यवसायबाट मनग्य लाभ उठाउन सकिएला । शारीरिक आलस्यताका कारण कार्य क्षेत्रमा सामान्य झन्झट उत्पन्न हुन सक्नेछ । सभासम्मेलनमा सरीकहुने अवशर हरु जुट्नेछ ।
शुभचिन्तकहरुको बृद्यि हुनाले कार्य सम्पादनमा प्रशन्नताको साथमा समय ब्यतित रहनेछ । बितीय क्षेत्रका कार्यमा भने गैर बिश्वसनिय ब्यत्तिहरुको पछि नपर्नु उत्तम रहनेछ । मनोरञ्जनका निम्ती सामान्य यात्राको सम्भावना रहेकोछ ।
रचनात्मक कार्यका क्षेत्रमा तपाईका कार्यले चर्चा पाउनेछ । साजेदारी कार्यका क्षेत्रमा भने बिशेष साबधान रहनु होला । नयाँकार्य थालनिको सम्भाबना रहेकोछ । यात्राका क्षेत्रमा सजग रहनु होला सामान्य चोट पटकको सम्भाबना रहनेछ ।
पारीवारिक कलहका कारण कार्य पुर्णतामा ढिलाई हुन सक्नेछ । सबारी साधनको प्रयोगमा बिशेष साबधान रहनु होला । ब्यापार ब्यवसायमा साजेदारी उत्तम नरहन सक्ला । मान्यजनको सहयोगमा सभासम्मेलनमा सरीक हुने अवसर जुट्नेछ ।
पुराना मित्रजनहरु सँगको भेटघाटले मन हर्षित तुल्याउला । कार्य पुर्णताको जस अन्य ब्यत्तिहरुलाईजानाले क्षणीक बैमनश्यता उत्पन्न हुन सक्नेछ । धार्मिक क्षेत्रको यात्राको सम्भावना रहेकोछ । प्रतिश्पर्दा जन्य कार्यमा अबल स्थान रहनेछ ।
कलाकौशलताका क्षेत्रमा समय ब्यतित गर्दा मन प्रशन्न रहनेछ । खानपानका योग रहेको छ । स्थान्तरणको सम्भाबना रहेकोछ । अधिक आत्मबल तथा घमन्डका कारण कार्य क्षेत्रमा सामान्य त्रुटि हुन सक्ने सम्भाबना रहेको छ ।
साजेदारी कार्यबाट मनग्य लाभ उठाउन सकिएला । नयाँकार्यको थालनि गर्ने समय रहेको छ । भोगबिलासमा समय ब्यतित हुन सक्नेछ । पारीवारिक साथ सहयोग द्वारा कार्य सम्पादनमा सहजता प्राप्त हुनेछ । सामान्य चोट पटकको सम्भाबना रहेको छ ।
मनोरञ्जनात्मक कार्यका क्षेत्रमा खर्च हुन सक्ने सम्भाबना रहेकोछ । मित्र तथा दाजु भाईहरुको साथ सहयोगमा कार्य सम्पादन हुनेछन । कुराकाट्ने ब्यत्तिहरुबाट सजग रहनु होला । स्वास्थमा सामान्य समस्या देखा पर्नेछ ।
स्थीर क्षेत्रमा गरीएको लगानि उत्तम साबित हुनेछन । अन्य ब्यत्तिहरुको पुर्णरुपमा बिश्वास नगरेकै बेश हुनेछ । अध्यन अध्यापनका क्षेत्रमा अधिक परीश्रम खर्चनु पर्नेछ । सामाजिक कार्य बाट अगाडी बड्ने उत्तम समय रहेकोछ ।
परीवारजनमा स्वास्थ सम्बन्धी समस्याले सताउन सक्नेछ । बिशिष्ट ब्यत्तिहरुको साथ सहयोगमा बृद्यिहुनाले कार्य सम्पादनमा सहजता रहनेछ । भौतिक श्रोत साधनको परीचालनमा समय ब्यतित रहन सक्नेछ । अध्यन अध्यापनमा समय उत्तम रहेकोछ ।